पेस्टो सॉसको साथ सिमी - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
पेस्टो सॉसको साथ सिमी
Ensaladas10 मिनेट3 व्यक्ति370२ क्यालोरी
गर्मीको रमाइलो गर्न सजिलो छ यदि हामी आफैंलाई थोरै व्यवस्थित गर्यौं भने। सत्य यो हो कि यस पटकमा म भान्सामा कम समय बिताउँछु ... त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन म गर्न चाहन्छु अन्तिम कुरा भनेको धेरै घण्टा खाना पकाउनु हो! यसैले म छिटो र सजिलो व्यंजनहरु को संख्या को फाइदा लिन्छु जुन हामीलाई अनुमति छ गर्मीको आनन्द लिनुहोस् स्वाद त्यागेर।
आजको रेसिपी ती मध्ये एक हो जसले यसको सरलताको साथ आश्चर्यचकित गर्दछ। यो पेस्टो सॉसको साथ सिमी सलाद हो। केहि अवयवहरूको साथ एक नुस्खा, जुन हामी अगाडि बनाउन सक्छौं र जुन पनि हो यातायात गर्न सजिलो यदि हामी बाहिर खायौं भने।
यो विधिले मेरो अर्को उद्देश्य पूरा गर्दछ: तपाइँलाई देखाउनको लागि कि ग्रीष्म inतुमा यो खान पनि सजिलो छ फलफूलहरू। समय बचत गर्न मैले पहिल्यै पकाएको गेडाहरू प्रयोग गरिसकें। हामीले चेरी टमाटर, केही जैतुन थपेका छौं र कपडाको लागि हामीले होममेड पेस्टो सॉस प्रयोग गरेका छौं जसमा तुलसीको सबै स्वाद छ।
तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि यदि तपाईंसँग बाँचेको पेस्तो छ भने सक्नुहुन्छ यसलाई बचत गर्नुहोस् फ्रिजमा तेलले ढाकिएको छ र तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस् अन्य व्यंजनहरु। सबै स्रोतहरू राम्रोसँग प्रयोग गर्नुपर्दछ!
1 पेस्टो सॉसको साथ सिमी
1.3 यस रेसिपीलाई तपाइँको Thermomix मोडेलमा अनुकूलन गर्नुहोस्
गर्मीमा फलफूलहरूको मजा लिनको लागि एक सजिलो र द्रुत विधि।
तयारी समय: 9M
सिमीको 400 ग्राम
1 पिट्टे कालो जैतूनको सानो साना भाँडा
G० ग्राम ताजा तुलसी पातहरू
२० ग्राम टोस्टेड पाइन नटहरू
Ted० ग्राम grated Parmesan पनीर
Ol०-30० g अतिरिक्त जैतुनको तेल
नुन (आवश्यक भएमा)
हामी भाँडाबाट सिमीहरू हटाउँछौं र त्यसलाई टोकरीमा वा स्ट्र्रेनरमा राख्छौं। कुनै थप फोम नआउन्जेल हामी ट्यापको मुनि राम्रो धुन्छौं। पानी धेरै कडा हुनु हुँदैन ताकि यसले पकाइएको सिमीलाई भत्काउँदैन। हामी निकासी दिन्छौं।
यसबीच, हामी कालो जैतुन पनि निकाल्छौं र चेरी टमाटरहरू धोई सुख्खा बनाउँदछौं।
हामी पेस्टो सॉस बनाउने अवसर लिन्छौं, यसको लागि हामीले लसुन र सफा र सुक्खा तुलसी पातहरूले टोस्टेड पाइन नटलाई कुच्यौं। हामी प्रोग्राम Seconds सेकेन्ड, गति 15। हामी टुक्राहरू ब्लेड तर्फ कम गर्छौं।
हामी ढक्कनमा कन्टेनर राख्छौं, थिच्नुहोस् सन्तुलन कुञ्जी र हामी तेल तौलौं।
नक्कल गर्न, हामी प्रोग्राम Seconds० सेकेन्ड, गति 30। हामी बोतल मार्फत तेल थोरै थोरै थप्दछौं, जब हामी मेयोनेज बनाउँछौं। हामी एउटा कचौरामा हटाउँछौं र ग्रेटेड चीज थप्छौं। हामी नुन समायोजित गर्दछौं।
एक कचौरा वा सलादको कचौरामा हामी निकालिए गेडाहरू राख्छौं, आधा टमाटर र काटिएको जैतुन थप्नुहोस्। पेस्टोको एक चम्चा चम्चा जोड्नुहोस् र सबै सामग्री राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्।
हामी खाना पकाउने पेस सॉसको कन्टेनरको साथ सलादको सेवा गर्छौं यदि केही डिनरले अधिक सेवा दिन चाहन्छ भने।
थप जानकारी - पेस्टो सॉसको साथ बटेर अण्डाहरू
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सलाद र तरकारीहरू, तरकारीहरू, गर्मी रेसिपी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » विशेष व्यंजनहरु » गर्मी रेसिपी » पेस्टो सॉसको साथ सिमी
गाजर, सलाद र च्याउ सूप